Amathambo ngezinyawo zakho - lena sina unyawo deformity ezidinga ukwelashwa. Kuyo yonke le minyaka, ithambo kuba nzima ngokwengeziwe ukuba umuntu ukugqoka izicathulo ewumngcingo, ekhathalela sebuhlungwini obunzima. Ngaphezu kwalokho, kusukela iphuzu yobuhle umbono ukusonteka akubukeki kumnandi, ikakhulu emlenzeni zesifazane. Lapho ithambo ifinyelela usayizi esikhulu futhi uletha eningi ngokungalungile, abantu bezama ayibulale ngakulahla nganoma iyiphi indlela.
Enye yezimbangela ezinkulu imbewu odokotela shayela okungafanele umthwalo wokusabalalisa ku unyawo. Phakathi kwezinye izinto ezithinta amathambo ekwakhekeni, kufanele kuphawulwe ukhuluphele, yofuzo, njalo egqoke izicathulo ne High Heels, izinyawo flat. Lesi sifo olandela, ngokuyisisekelo, wobulili bubuhle. Abesifazane babe nemisipha mobile kakhulu, ngakho-ke uthambekela ukusonteka. Futhi uma sifaka kule njalo egqoke amabhuzu nezicathulo izithende zakhe, hhayi ukubukeka itshe alinde isikhathi eside. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ithambo nimkhiphela - it is kuphela isici kusukela iphuzu yobuhle buka, kodwa empeleni isifo yangempela ukuthi edinga yezokwelapha, uma kuwukuthi sesimeni sokunganakwa.
Uma ithambo yayincane, kodwa isithupha uzimisele degrees amabili noma ngaphezulu, kubalulekile ukubhekana ngokushesha kudokotela. Deformations esikhathini esizayo bayothola ezinye iminwe kanye isithupha kungase hlanhlatha ngu degrees 60 noma ngaphezulu. Lapho inkinga isiqalile, futhi umuntu ozwa ubuhlungu kakhulu ngisho ngaphandle izicathulo, Gait yakhe kuyahlukahluka, umthwalo emalungeni nomgogodla iyakhula. I ngaphambili iziguli zazidluliselwa udokotela wezifo zamathambo, ngcono. Iqiniso lokuthi lesi sifo saqala ifomu uzodinga ukuhlinzwa, bese izinyanga eside ukuvuselelwa. Ezimweni ezimbi kakhulu, odokotela aye ayisebenzisa kaningi eziningi izinhlobo imisebenzi.
Uma lesi sifo isakhasa, ungakwazi ngumnikazi ekhaya ukuze siqiniseke ukuthi ithambo iyeke ezikhulayo. Khetha izicathulo ezifanele izithende emibili kuya kwemine amasentimitha, eyenziwe izinga impahla. Kungcono ukukhetha izicathulo nezicathulo nge izinzwane round, esakhiwe ngezinto ezithambile kanye ukhululekile, lesikhumba ozikhethela. Thenga orthotics ukusiza kahle ukusabalalisa umthwalo, ukusekela ijika engokwemvelo unyawo. Kanye ngosuku, ukwenza unyawo massage, okuyinto aqede ukucindezeleka. Ungakwazi iphendukele egqoke ibhasi ekhethekile ucosha futhi ibeka wezinyawo phezu nawoqukula. Lokhu kuzosiza ukuvimbela ukuvuvukala ukusekela isikhundla efanele isithupha. A izikhathi ezimbalwa ngesonto ukwenza yokuzijwayeza: izinzwane imizuzu 10-15 ukuze aphakamise phansi amapensela, amaduku noma izibaya. Zama ukuhamba ekhaya engafaké zicathulo.
Uma uqala ukukhathazeka ubuhlungu, zisebenzisa izindlela ezihlukahlukene amakhambi abantu ngoba impilo evamile. Folk zokupheka ukususa ubuhlungu, ukunciphisa ukuvuvukala bese ususa voltage kusukela isitaki.
Buso ezenziwe ngobumba. Kuyinto umkhiqizo kuphela detoxifies, rejuvenates futhi uyasondla isikhumba izakhamzimba. Inani elincane ubumba obomvu noma oluhlaza chaza emanzini afudumele, wanezela uLwandle Lukasawoti, bese zisebenza slurry kokuphelele ngezinyawo. Gqoka amasokisi ukotini, phezulu, bopha lesikwa ke futhi agqoke amasokisi, kodwa efudumele, sizungeze nge buso akuyona amahora engaphansi kwemithathu, futhi kungcono ukuqhuba lo msebenzi okungenani kabili ngesonto ngaphambi sokulala.
Licindezele amaqabunga burdock. Ngokushesha analgesic, khulula ukukhathala. Moisten amaqabunga amanzi burdock, unamathisele ukuba unyawo bese ithambo, ukugoqa phezulu kunoma iliphi Indwangu. Shiya cindezela ebusuku.
Iodine Mesh ngokumelene ithambo onyaweni. Iodine anezakhi eqeda ukuvuvukala futhi kunciphisa ukuvuvukala. Zama awubeka ibhandishi noma gauze e esincane, noma ngeke bashe.
Ikhofi Aeropress: ngethoyizi elisha for the ikhofi
Izikweletu lwezezimali: ukuhlaziya, isakhiwo. Izikweletu - ke ...
Sledge "Timka" - ephelele ebusika snowy